Bariga Afrika – Page 5 – Dawladnimo News
Home » Wararka » Bariga Afrika (page 5)
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka oo dajinaya Ajendayaasha Kalfadhiga 4aad
September 12, 2018	Comments 398 Views
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda 41-aad ku yeeshay Xarunta golaha shacabka ee magaaladda Muqdisho. Kulanka waxaa shir guddoominayay Guddoomiye ku-xiggeenka koowaad ee Golaha Shacabka Mudane C/weli Sheekh Ibraahim Muudeey, Waxaana goobjoog ahaa guddoomiye ku-xiggeenka labaad ee mudane Mahad Cabdalla Cawad iyo xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi Buux. Kulanka intiisa badan ...
Daawo: Mashruuca dhismaha cusub ee Guriga Umadda oo lakala saxiixday
March 12, 2018	Comments 547 Views
Gudoomiyaha Golaha Shacabka iyo dawladda Turkiga ayaa kala saxiixday dhismaha cusub ee Guriga Ummadda oo ah aqalka ay ku shiraan golaha shacabka qaranka Soomaaliya. Hoos ka daawo munaasabadda lagu kalasaxiixday heshiiska oo ay kasoo qayb galeen hoggaanka baarlamaanka iyo safaaradda wadanka aan walaalaha nahay ee Turkiga.
Madaxweyne Gaas: Doorashadu waxay dhacaysaa xiligeeda
March 12, 2018	Comments 635 Views
Qaar kamid ah Siyaasiyiinta Puntland ayaa ku eedeeyay madaxweyne C/wali Gaas in uu damacsan yahay waqti kororsi,islamarkaana dib loo dhigo doorashadda. Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland Cabdiwali Gaas ayaa ka jawaabay eedeymo dhawaanahan soo baxayay oo ahaa in madaxweynaha uu qorshaynayo in uu muddo kororsi sameeyo. Madaxweyne Gaas oo waraysi siinayay BBC-da , ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaabaha uu isaga ...
Daawo: Khudbaddii Soomaalida Gilgishay ee Madaxweyne Farmaajo
March 12, 2018	Comments 835 Views
Khudbadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mohamed Abdullahi Farmaajo uu ka jeediyey, munaasabadda furitaanka kal-fadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Khudbadaan ayaa ah mid taariikhda gashay oo gilgishay dhammaan dareenka nool ee Soomaaliyeed. Madaxweynuhu wuxuu khudbadiisa ku taabtay arrrimaha madaxbanaanida qaranka, ammaanka, dcafiska horjoogayaasha argagixisada, iyo difaacidda xuduudaha dalka ee wadamada ku xadgudbaya. hoos ka daawo muuqaalka oo dhamaystiran
Talo ku socota Cabdiraxmaan Cabdishakuur!
March 12, 2018	Comments 812 Views
Cabdiyow waxa aan sheeka ku maqlay in nin sheekh ah uu hadda ka hor masaajid ka jeediyay khudbad ku saabsan xisaabta maalinta qiyaamo. Nin safka hore ee dheggeystayaasha ku jiray ayaa intii ay khudbaddu socotay oohin joojin waayay. Sheekhu waxa uu maleeyay in ninkan uu fahmay macnaha khudbadda, la na qushuucay. Mar dambe, oo ay khudbaddii dhammaatay, ayaa uu ninkii ...
Madiido Diimeedka Sucuudiga!
March 11, 2018	Comments 1,002 Views
Sida sawirka hoose ka muuqda dawladda Sucuudiga waxa ay doonaysaa hirgelinta mashaariic waxbarasho oo Soomaaliya oo dhan laga hirgeliyo . Yeelkadeede, Sucuudiga ma doonayaa in uu dalka ka hirgaliyo tacliin isu dheeli tiran oo baahiyaha aqooneed sida macaahid farsamo, colleges si gaara noogu soo saara dhakhaatiir caafimaad, enjineero iyo khubaro dhanka beeraha , badda iyo xolaha ah? Haddiise sidii caadada ...
Istiraatijiyada Imaaraadka ee mandiqadda (Dr. Saadaq Eenow)
March 8, 2018	Comments 1,698 Views
Badda Cas waqooyigeeda waxaa dhaca labada gacan ee kala ah gacanka Suweys iyo gacanka Caqaba. Koonfurteedana waxaa dhaca madiiqa Baab Al-Mandab. Dhanka bari waxaa kaga aaddan Yaman iyo boqortooyada Sacuudiga. Dhanka galbeed waxaa kaga aaddan Jabuuti, Eriteriya, Suudaan iyo Masar. Imaraatku waxay degsadeen istraateejiyad ay kaga taliyaan baddaas leh ahmiyadda deegaan-siyaasadeed. Si ay ula uga hor-tagaan cabsida ay ka qabaan ...
Maxaa Shalay Maanta uga eg!
March 8, 2018	Comments 1,200 Views
Waxaan ku nool nahay duni isbedelaysa , quwadaha dunidana baratan ugu jiraan sidii ay ku qabsanlahaayeen umadaha taagta daran ee dhaca goobaha muhiimka u ah ganacsiga dunida ama ilaah ku manaystay khayraadka dabiiciga ah, waana tab soo jireen ah oo waligeed ninkii awood isbidaa uu kula kaco ciddii markaa ka taagdaran ee alla u loogo. Taariikhda waxa ay noo sheegaysaa ...
Canshuuraha iyo Soomaaliya
March 8, 2018	Comments 952 Views
Ereyga canshuur (Tax) waa eray laatiin ah (Taxo) oo kayimid wadanka Giriigga.Canshuurtu waa waa qayb kamida lacagaha ay dawladdu soo rogto taasi oo lagaqaado cidda ay canshuurtu kuwaajibtey kuwaas oo noqonkara sharikado ganacsi ,shikhsiyaad ganacsato ah iyo dadka shaqeeya oo hela lacag heerkeedu gaarsiisanyahay xaddiga canshuurista mushaaraadka. Canshuuraha waxaa awood uleh inay qaadaan hay’ado gaar ah oo looxilsaaray. Haddii ...
Bahdilaaddu way sii socon doontaa Soomaaliyeey?
March 5, 2018	Comments 739 Views
Bahdilaadda iyo xad-gudubka qaranimada Soomaaliya ee inooga imaanaya wadamada kale waa mid weligeed socon doonta haddii aan wax ka bedelin fikradaha qaldan ee halkaas ina dhigay 27-sanno ee lasoo dhaafay. Bahdilaada waa socon doontaa inta ay dowladeenu garab ka haysan dadkeeda. Bahdilaadu waa socon doontaa inta qabiilku inagala weynyahay qaranimada. Bahdilaadu waa socon doontaa inta aan diidanahay ilaalinta sharciga iyo ...